ऋचाको खुलासा : प्रेममा छु, उसैसँग बिहे हुन्छ - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
ऋचा शर्मा अहिले चलचित्र ‘न यता न उता’ को प्रमोशनमा व्यस्त छिन् । यो चलचित्रले उनलाई राम्रैसँग तताएको छ, बिहान देखि साँझसम्म । चलचित्र सुनकेशरी प्रदर्शनभएपछि ऋचा यो चलचित्र मार्फत फेरी एकपटक दर्शकमाँझ आउँदैछिन् ।
‘न यता न उता’ मा निकै मिहनेत गरिएको छ, सोहि कारण दर्शकले पत्याउने विषयमा पुर्ण आशावादी छु, ऋचाले थपिन् । उनका अनुसार मिहेनत र चलचित्र भित्रको विषयवस्तुले दर्शक तान्नेमा हाम्रो टिम विश्वस्त छ ।
यसपटक कान्तिपुरकर्मी रामजी ज्ञवालीले ऋचासँग लामै गफगाफ गरेका छन् । जुन अन्तरवार्ता केहि दिनमै प्रशारण हुनेवाला छ । तर, गफगाफमा ऋचाले एउटा खुलासा पनि गरेकी छिन्, जुन कुरा अहिलेसम्म कुनैपनि मिडियामा भनेकी छैनन् ।
अभिनेत्री ऋचाले एक ह्याण्डसम पुरुषसँग डेटमा रमाइरहेको खुलासा गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हाल एक प्रेमीसँग डेटमा रमाइरहेकी छु, उसैसँग विहे हुनेवाला छ ।’ ऋचाले प्रेमीको नाम भन्न नमानेपनि केहि महिनामा नाम घोषणा गर्ने बताइन् ।
ऋचाले प्रेमीको बारेमा निकै तारिफ गरिन् । सेन्स अफ ह्युमर भएको एक मात्रै पुरुष भेट्टाएकी छु, उनले भनिन्, ‘मैले डेट गरिरहेकै पुरुषसँग बिहे गर्ने सपना छ ।’ जिन्दगीमा केहि प्रेमी भेटेपनि उनि जस्तो कोहि प्रेमी नभेटेको ऋचाको तर्क छ । ऋचाको प्रेमी को हुन् ? के उनीसँगै बिहे हुन्छ त ? केहि समय त कुर्नैपर्ने भयो ।